News Collection: यौनसम्पर्क गर्दागर्दै कन्डम फुटेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ ?
यौनसम्पर्क गर्दागर्दै कन्डम फुटेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ ?
कन्डम फुटे के गर्ने ?
हामी सबैलाई थाहै भएको कुरा हो, सुरक्षित यौनसम्पर्कका लागि कन्डमको सही तथा नियमित प्रयोग गर्नुुपर्छ। कतिपय स्थितिमा कन्डम फुट्न सक्छ। कन्डम नफुटोस् भनेर अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा यो स्तम्भमा पहिले पनि निकै चर्चा गरिसकेका छौं, पढ्नु नै भयो होला। कन्डम फुट्दा यौनसम्पर्कमा संलग्न दुवै व्यक्तिमा निकै चिन्ता हुनसक्छ। यस्तो स्थितिमा के गर्ने ? एकछिन चर्चा गरौं।
कन्डम फुटेको थाहा भए पनि आत्तिनु हुँदैन, शान्त रहने प्रयास गर्नुपर्छ जसले सही निर्णय गर्न सहयोग मिल्छ।
यौनसम्पर्क गर्दागर्दै वीर्य स्खलन हुनुभन्दा पहिले नै कन्डम फुटे यौनसम्पर्कलाई तुरुन्त रोकी लिङ्ग बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि नयाँ कन्डम लगाएर मात्र यौनसम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
वीर्य स्खलन भैसकेको भए, सावधानीपूर्वक लिङ्गलाई झिक्नुपर्छ।
त्यसपछि लिङ्ग तथा त्यसको वरिपरिको क्षेत्र साबुन तथा मनतातो पानीले
कन्डम फुट्नुको कारण र त्यसको सम्भावित असर -जस्तै कि गर्भ रहने वा यौनरोग सर्ने सम्भावना) का बारेमा आफ्नो जोडीसँग विस्तृत रु पमा कुराकानी गर्नुपर्छ।
म बेडमा प्रेस गरेर मैथुन गर्छु। यसो गर्दा मलाई सेक्स गरेजस्तै आनन्द आउँछ। यसले गर्दा पछि केही प्रोब्लम त आउने होइन लिंगमा ?
हस्तमैथुन गर्न व्यक्तिले अनेक किसिमका उपाय अपनाउँछन्। त्यसमध्ये एउटा तरिका लिङ्गमा दबाब दिनु हो। सामान्यतः यसरी हस्तमैथुन गरेका कारण नै भविष्यमा कुनै समस्या होला भन्ने म मान्दिनँ। तपाईंले लिङ्गमा कुनै किसिमको चोट नपुगोस् भन्ने कुरामा भने ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।
Performance anxiety कम गर्न के गर्नुपर्ला ?
किशोरावस्था तथा युवा अवस्थामा लिङ्गको उत्तेजना सजिलै हुने भए पनि अनपेक्षित रूपमा यसरी लिङ्गको उत्तेजना नहुँदा निकै चासो तथा चिन्ता हुन सक्छ। निरन्तर प्रयासपछि पनि सफलता हासिल गर्न नसक्दा समस्या चर्को हुनसक्छ। सर्वप्रथम त कारण नै पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसको उपचार वा समाधान त्यसैमा भर पर्छ। कार्य सम्पादनको चिन्ताले धेरै कुरा बिगार्न सक्छ। कुनै कार्य ठीक तरिकाले हुँदैन कि भनेर चिन्ता गर्न थालिन्छ र बिस्तारै यो चिन्ता बढ्न थालेपछि कार्य सम्पादन क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ। कति त यौन क्रियाकलापबाट परहेज गर्छन् अनि आत्मसम्मान घट्न थाल्छ, सम्बन्धमा समस्या देखा पर्न थाल्छ। यस विषयमा सधैं चिन्ता गरिरहँदा वा चिन्ता गर्दिनँ भनेर -कतै आज गर्दा पनि उत्तेजित हुँदैन कि भनेर) त्यसकै बारेमा जहिले पनि सोचिरहँदा यौनकार्य सम्पादनमा सुधार आउँदैन। मनमा रहेको भय वा चिन्ता हटाउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ। तनाव र चिन्ता कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ औ षधी सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले यस्तो स्थितिमा हिप्नोसिसले मद्दत गर्ने कुरा गरेका छन्।
महत्वपूर्ण कुरा के भने दृढ अठोट तथा धैर्यता यसका लागि अति नै आवश्यक हुन्छ। यसकार्यमा आˆनो यौन साथीको सहयोग तथा समझदारी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यौनसाथीको समझदारीपूर्ण सहयोगले मनमा भएको चिन्ता हटाउन अनि आत्मविश्वास जगाउन मद्दत गछर् । यौनसाथीको कुनै पनि नकारात्मक टिप्पणीले समस्या बढाउँछ। समस्या कायम यौन विशेषज्ञ वा मनोरोग विशेषज्ञको सहयोग आवश्यक हुन्छ
मेरो लिंग सानो छ, म १९ वर्षको युवा हुँ।
लिङ्गको नापका सम्बन्धमा चासो हुनु स्वाभाविक हो, तर लिङ्ग सानो भयो भनेर पक्का गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नाप कति छ? कसरी नाप्नुभयो ? लेख्नु होला। सबैको उचाइ बराबर नभएजस्तै लिङ्गको लम्बाइ तथा मोटाइ पनि एकनासको हुँदैन। महत्वपूर्ण कुरा त के भने केही सानो हुँदै मा यसले काम गर्नै नसक्ने होइन अनि महिलाको यौन सम्बेदिनशील अङ्ग भगांकुर बाहिरतिरै हुन्छ।
म शीघ्र पतनका साथै स्वप्नदोषको पनि सिकार छु -१८ वर्ष)।
यौन उत्तेजनामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुरामा भर पर्छन्। प्रायः सबैजसो व्यक्तिले आफ्नो जीवनको कुनै बेला वीर्य स्खलन चाँडो भएको अनुभव गरेका हुन्छन्। किन्सेले गरेका अध्ययनमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिने टभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषको चरमसुख पाएको देखिएको थियो। शीघ्र स्खललाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा बहस पनि नभएको होइन। लिङ्ग योनिमा पसाएको ३० सेकेन्डमै वा एक मिनेटभन्दा कम समयमा वा ५ देखि १० धक्कामै वीर्यस्खलन भए छिटो स्खलन भएको भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास पनि भए, तर अहिले यो सोचाइमा केही परिवर्तन आउन थालेको छ।
यसरी छिटो वीर्यस्खलन हुनुलाई शीघ्र वीर्य स्खलन भनिन्छ। जोडीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ताले समस्या बढाउँछ। केही औ षधीको पनि यस्तो प्रभाव हुनसक्छ। आक्कल-झुकक्ल यस्तो शीघ्र स्लखन हुनु अस्वाभाविक होइन। यौनसम्पर्क रोक्ने-सुरु गर्ने, आसन परिवर्तन गर्ने, स्खलनहोला जस्तो भएपछि तुरुन्तै लिंग योनिबाट बाहिर झिकेर लिङ्गको फेदलाई बेस्सरी अठ्याउने, कन्डम प्रयोग गर्ने, पिसाब आउँदा रोक्न प्रयोग गरिने मांसपेशीको कसरत गरेर वीर्य स्खलन रोक्ने अभ्यास गर्न सक्दा पनि फाइदा पुग्छ।
स्वप्नदोष स्वाभाविक हो र यसले के संकेत गरिरहेको छ भने तपाईंले यौनचाहना शान्त पार्न गर्नुभएको उपाय पर्याप्त छैन। यदि तपाइर्ंले यौ नसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने कुनै नियमित उपाय गर्न पाउनुभएको स्थितिमा यो समस्या आफैं कम भएर जान्छ।